Haweeneydii ugu horeysay ee Somaliya duuliye ka noqtay oo Muqdisho si weyn loogu soo dhaweeyay+ Sawirro - Get Latest News From Horn of Africa
Haweeneydii ugu horeysay ee Somaliya duuliye ka noqtay oo Muqdisho si weyn loogu soo dhaweeyay+ Sawirro
By On Jul 19, 2017 Last updated Apr 2, 2019
waxaa maanta si weyn magaalada muqdisho loogu soo dhaweeyay Asli Xasan Cabaade (Calansido) oo ka mid ah haweenka Taariikhda ku leh Soomaaliya kadib markii ay maanta ku soo laabatay magaalada Muqdisho, waxaana si diiran u soo dhaweeyay haweenka Qaranka iyo mas’uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda Soomaaliya.
Asli waxay noqotay taariikhda gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ah oo diyaarad dagaal duulisay, iyadoo xubin firfircoon ka ahayd duuliyaashii ciidanka Cirka Soomaaliya xiligii berisamaadkii, waxaana burburkii dowladii milatariga ka dib Asli ay aheyd hooyo u ololeysa nabad iyo isu keenida bulshada Soomaaliyeed.
Guddoomiyaha Haweenka Qaranka Soomaaliyeed Marwo Batuulo Axmed Gabale ayaa ka hadashay soo dhaweynta ay maanta u sameeyeen Asli Cabaade, waxayna sheegtay in Asli ay tahay wadaniyad astaan u ah Qaranka
Asli Xasan Cabaade oo iyana saxaafada la hadashay ayaa si khiiiro ku jirto ugu mahad celisay dhamaan bulshada ka qayb qaadatay soo dhaweynteeda.
Waxay intaa ku dartay ujeedada safarkeeda uu la xiriiro martiqaad ay heshay dowlada Somalia iyo sidii ay ugu kuurgeli laheyd horumarka iyo nabada ka jirta dalka, waxayna sheegtay iney diyaar u tahay iney bulshada Soomaaliyeed la wadaagto wixii khibrad iyo aqoon ah ee ay leedahay.
“Waad Mahadsan tihiin sida wanaagsan oo aad ii soo dhaweyseen waana ku faraxsanahay inaan maanta ku soo laabto dhulkeyga hooyo, dhamaantiina waan idinkaga mahad-celinayaa” sidaasi waxaa tiri Asli Xasan Nuur.
Bishii September 1976-dii ayay aheyd markii Asli Xasan Nuur ay hawada la gashay Diyaaradii ugu horeysay, inay duuliye noqotana waxay u gashay dadaal aad u balaaran iyadoo ku soo kortay Xerada Ciidammada Cirka ee Afisiyooni.
Muddooyinkii ugu danbeeyay waxay Asli ku nooleyd gobolka Texas ee dalka Mareykanka, iyadoo ka mid ah howlwadeenada isbitaal magaaladaas ku yaalla oo lagu daweeyo caruurta.